Minnehaha-Hiawatha Community Works » Noo sheeg Waxa aad Danaynaysid!
Noo sheeg Waxa aad Danaynaysid!
By robb, August 22, 2011 10:08 am
Is beddel ku samee Xaafadda greater Longfellow iyo Phillips! Mashruuca Community Action for a Renewed Environment (CARE) waxay doonayaan inay ogaadaan afkaarta aad ka qabto sida aanu u horumarin karno faya qabka iyo tayada nolosha ee xaafadda yada.
Hadii aad ku nooshahay, kashaqaysid ama aad booqatid xaafadaha Longfellow ama Phillips, waxaan doonaynaa inaan ogaano afkaartaada. Maxay yihiin hantida bulshooyinku? Maxaad qusaynaysaa? Sahanka mashruuca bulshada CARE waxaad ka heli kartaa halkan iyagoo English, Somali iyo Spanish ah.
CARE waxay isu keentaa isbahaysi ka dhaxeeya ganacsiga, bulshada, dowladda iyo ururrada aan dowliga ahayn si siirida loo saaro halista ka imaan karta dibaatada deegaanka iyo arrimaha xaqsoorka deegaanka xaafadaha dhaxdooda, iyadoo laga duulaayo afarta ujeeddo ee soo socda:
Yareeynta halista ka imaan karta deegaanka iyadoo loo mareyo wax wada qabsiga inta ay qusayso.
Bulshada in laga caawiyo garashada halisaha ka imaan kara deegaanka.
La shaqeynta bulshada sida ay u kala dooran lahaayeen hawlaha lagu yareeyo halisaha deegaanka.
Abuuridda isbahaysiyo bulshada oo isku filan oo sii wada hagaajinta deegaanka.
Mashruuca CARE waa mashruuc laba sano ah oo ku saleeysan deeg katimaadda U.S. Environmental Protection Agency oo ay maamusho Hennepin County taas oo qayb ka ah mashruuca hawlaha bulshada ee Minnehaha – Hiawatha. Booqo www.minnehaha-hiawatha.com/care si aad wax uga barato mashruuca CARE. Soo gudbi afkaarta oo ogow xafladaha soo socda.
Wixii warbixin dheeraad ah:
Howsha Hiawatha CARE – Cusbeysiinta Howsha
Shaxda Darajo siinta Heerka Dhibaatada – Cawaaqibka dhanka Caafimaadka,Deegaanka, iyo Dhaqaalaha ah